Amanqaku kaJayson DeMers Martech Zone |
Amanqaku ngu I-Jayson DeMers
NgoLwesine, Julayi 18, 2013 I-Jayson DeMers
Ke uyimvumi ejonge ukwenza ingxelo kwi-intanethi kwaye ucinga ngokwenza ubuchule bokukhangela i-injini yokukhangela (SEO) ikusebenzele? Ukuba kunjalo, cetyiswa ukuba, ngelixa kungekho bullet yomlingo ekusebenziseni i-injini yokukhangela, akukho nzima ukuphucula ukubonakala kokukhangela ngaphakathi kuGoogle nakwiBing. Nazi iindlela ezintlanu ezifanelekileyo ze-SEO zeemvumi zokuphucula ukubonakala kweinjini yokukhangela. 1. Ukubhloga kubloga yindlela entle
NgoLwesibini, Julayi 9, 2013 I-Jayson DeMers
Isisombululo sesoftware esenziwe ngobuchule (BI) sibalulekile kuwo nawuphi na umbutho ofuna ukumisela i-ROI yemizamo yawo ekwi-Intanethi. Nokuba kulandelwa iprojekthi, umkhankaso wentengiso ye-imeyile, okanye uqikelelo, inkampani ayinakho ukukhula ngaphandle kokulandela umkhondo wokukhula kunye nethuba ngokunika ingxelo. Isoftware yoHlaziyo iya kudla ixesha kunye nemali kuphela ukuba ayifaki zifoto ezichanekileyo zendlela elenza ngayo ishishini. Jonga ezi zizathu zithandathu zokuwisa enye
Ixesha elingaphezulu, i-SEO iye yanzima kwaye yangqongqo ngakumbi, kodwa ngaba oko kuthetha ukuba kuyabiza kakhulu? Ayizizo zonke iinkampani ezifuna iinkonzo ze-SEO ezisekwe kwi-Intanethi okanye ezinxulumene ne-IT. Ngapha koko, uninzi luninzi, amashishini endawo asebenza kwindawo ethile. Aba bantu bafuna i-SEO yendawo endaweni yesiko, i-SEO yesizwe. Amashishini endawo kunye nabantu ngabanye - oogqirha bamazinyo, abatywini ngemibhobho yamanzi, iivenkile zeempahla, iivenkile ze-elektroniki- abanayo imfuno engxamisekileyo yokufumana inqanaba eliphezulu kukhangelo lwehlabathi
Iindlela ezi-5 zokwenza abaThengi bakho bazive bethandwa
NgoLwesibini, Juni 11, 2013 I-Jayson DeMers
Ezona nkonzo zibalaseleyo zabathengi zifuna okungaphezulu kunoncumo, nangona ngokuqinisekileyo sisiqalo esihle eso. Abathengi abonwabileyo bakhokelela ekuphindaphindweni kweshishini, ukonyusa uphononongo oluqinisekileyo (olonyusa i-SEO yengingqi), kunye nokunyusa imiqondiso yentlalontle enezimvo ezilungileyo (ezibonisa ukubonakala kokukhangelwa kwezinto eziphilayo), kwaye akukho nkampani inokubakho ngaphandle kwabaxumi bayo. Nazi iindlela ezintlanu ezilula zokuqinisekisa ukuba abathengi bakho baziva bethandwa. 1. Buza imibuzo eyiyo Yonke inkampani kufuneka ibuze lo mbuzo yonke imihla: Yintoni
Ungakwandisa njani ukubandakanyeka kwabaphulaphuli kunye nokufumana ingxelo
NgoLwesithathu, Juni 5, 2013 I-Jayson DeMers
Ukudala i-buzz ejikeleze ishishini kunye nokufumana abaphulaphuli ekujoliswe kubo banomdla kwiimveliso okanye iinkonzo zakho linyathelo lokuqala lokwakha uluntu oluthembekileyo. Ngexesha elifutshane, oku kungakhokelela ekwandeni kwezithuthi kunye nentengiso. Kwixesha elide, oku kunokuseka iqela labathunywa be-brand abasebenza njengeqela labathengisi be-guerilla. Kuba ukuphumelela iintliziyo zedemokhrasi yakho kuxhomekeke kakhulu kuthethathethwano lwabaphulaphuli, kubalulekile ukusebenzisa